Internship ဆင်းဖို့အတွက် First year ကတည်းက စတွေးပါ။ - Intern Plus
Internship ဆင်းတယ်ဆိုတာ အခုလျှောက်လိုက်လို့ အခုရသွားနိုင်တဲ့ Process မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ Candidates ဘက်ကကော၊ Employer ဘက်ကကော သေချာအချိန်ပေးရတဲ့ Process တစ်ခုပါ။ Intern လျှောက်မယ့်သူဘက်ကလည်း ကိုယ်လျှောက်ချင်တဲ့ Company အကြောင်းကိုသေချာလေ့လာသလိုပဲ အလုပ်ရှင်ဘက်ကနေလည်း Intern လာလျှောက်သူရဲ့ အရည်အချင်းတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို သေချာပြန်လေ့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် ကိုယ်အနေနဲ့ Intern လျှောက်ဖို့ကို First year လောက်တည်းကစလို့ စနစ်တကျ ကြိုပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
Internship တွေမလျှောက်ခင်မှာ ကျောင်းပြီးရင်ဘာလုပ်ချင်တာလဲ၊ ဘာကိုစိတ်ဝင်စားတာလဲ စသဖြင့်တွေးထားပါ။ အဲ့လိုမှ ကိုယ့် Internship အတွေ့အကြုံတွေက ကိုယ်တကယ် အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝါသနာပါတာကိုရေရေရာရာမသိဘဲ Intern တစ်ခုရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ လျှောက်လိုက်ခြင်းက ကိုယ့်အချိန်တွေကို ဖြုန်းတီးခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။
ကိုယ့်ရဲ့ Seniors တွေကို Internship နဲ့ပက်သတ်လို့မေးပါ။
Senior တွေက Internship ကို ဘယ်လိုရှာခဲ့လဲ။ ဘယ်လိုတွေလျှောက်ခဲ့လဲ။ Company တွေဘယ်လိုရွေးချယ်ခဲ့သလဲ။ ကိုယ့်ဘက်က လိုအပ်တဲ့ Skills တွေက ဘာတွေလဲ။ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ စသဖြင့်မေးထားခြင်းက ကိုယ်တကယ် Intern လျှောက်တဲ့အခါမှာ အထောက်အကူအများကြီးရစေပါတယ်။
Internship ရဲ့ အရေးပါပုံကိုသိပါစေ။
Internship ဆိုတာ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေ အများဆုံးရနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်အလုပ်ဝင်တဲ့အခါ ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာတွေကို သေချာသင်ယူထားလို့ရပါတယ်။ Intern ပြီးတဲ့အခါ Professional တစ်ယောက်ဆီကနေ Feedback ရနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ့်အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေက်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ တချို့သောအလုပ်တွေက ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သဘောကျရင် ကျောင်းပြီးတဲ့အခါ Full time အလုပ်လုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းလေ့ရှိတာကြောင့် ကိုယ့်အတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်လည်းရလာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် Page, Blog, Website တစ်ခုရှိထားရင်ပိုကောင်းပါတယ်။
တချို့အလုပ်တွေ (ဥပမာ-Photography, Journalism, Content writing, etc.) နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Intern လျှောက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Page, Website တစ်ခုရှိထားခြင်းက အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ရှိခြင်းဖြစ်လို့ သူများထက်ပိုပြီး Intern ရနိုင်ခြေပိုများပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ CV/ Resume ကိုပြင်ဆင်ထားပါ။
Intern လျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်လျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် CV/ Resume ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိထားဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ Experience နေရာမှာ ကိုယ်ကျောင်းမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ Activity တွေ၊ ပွဲတွေအကြောင်းထည့်ရေးလို့ရတာကြောင့် ကျောင်းက activity တွေမှာ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ ကိုယ်တိုင်သင်ယူမှ ရနိုင်မယ့် Time management, Problem solving skills, Communication skills အစရှိတဲ့ Soft skills တွေကလည်း အဲ့လို activity တွေကနေတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ် Intern လျှောက်ချင်တဲ့ Company ကိုရွေးချယ်ပြီး ကြိုလေ့လာထားပါ။
ကိုယ်သဘောကျတဲ့ Field ကိုသိပြီဆိုရင် ဘယ် company/ organization မှာ ကိုယ်က Intern လျှောက်ချင်လဲဆိုတာရွေးပါ။ Intern လက်ခံသလားစုံစမ်းထားပါ။ ကိုယ်လျှောက်ချင်တဲ့နေရာရဲ့ Job Description တွေကို လေ့လာပြီး လိုအပ်တာတွေကို ကြိုဖြည့်ဆည်းထားပါ။ ပြီးရင်တော့ Companyအကြောင်း၊ အဲ့မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအကြောင်း၊ သူတို့ရဲ့ LinkedIn profile တွေကို ကြည့်ပါ။ ကိုယ်ကအဲ့အလုပ်မှာ Intern ရခဲ့ရင် Company အကြောင်း အထိုက်အလျောက်သိနေသလို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ စိမ်းမနေတော့ဘဲ ရင်းနှီးနေတယ်လို့ ခံစားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Internship လျှောက်မယ့်သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ဘက်က ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အချက်တွေကို သိသွားလောက်ပြီလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ “Internship ကို Company ကြီးတွေမှာလျှောက်သင့်သလား Startup တွေမှာလျှောက်သင့်သလား” ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်းသွားရောက်ဖတ်ရှူနိုင်ပါတယ်။
Internship ဆင်းတဲ့အခါ Company ကြီးတွေမှာဆင်းသင့်သလား? Startup...